Group-ka C ee koobka qarammada qaaradda Afrika 2019 oo caawa la soo gabagabeeyey …+ SAWIRRO – Gool FM
(Qahira) 01 Luulyo 2019. Waxaa caawa la soo gabagabeeyey Group-ka C ee koobka qarammada qaaradda Afrika 2019, iyadoo labo xul ay si toos ah uga soo baxeen Guruubkan.
Xulka qaranka Algeria ayaa 3-0 uga adkaaday Tanzania si la mid ah xulka Senegal oo 3-0 diray dalka Kenya.
Haddii ay ku horreyno kulanka dhexmaray Algeria iyo Tanzania, xulka Algeria ayaa saddex gool ee kulankan la yimid qeybtii hore ee ciyaarta waxaa uu ka kala helay ciyaryahan 35’daqiiqo Islam Slimani iyo labo kale oo uu raacsaday 39’daqiiqo iyo 45’daqiiqo Adam Ounas, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-0 looga adkaaday Tanzania.
Xulka Algeria ayaa sidaas ku gaaray guushiisii saddexaad oo xiriir ah isagoo Guruubkan C kaalinta koowaad iyagoo leh sagaal dhibcood.
Dhinaca kale Senegal ayaa 3-0 uga adkaaday Kenya oo kaarka cas laga qaatay xilli Sadio Mane uu labo jeer shabaqa soo taabtay.
Kulankan ayaa qeybtii hore lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0 ah, laakiin inta aan la aadin nasashada xulka Senegal ayaa rigoore lagu abaal-mariyey balse waxaa ka khasaariyey Sadio Mane.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta, 63’daqiiqo waxaa hoggaanka u dhiibay Senegal ciyaaryahan Ismaila Sarr, waxaana labo gool oo kale raacsaday weeraryahanka kooxda Liverpool ee Sadio Mane iyadoo goolka dambe uu ahaa gool ku laad ama rigoore.
Waxaa xusid mudan in kulankan uu xulka Kenya kaarka casaanka ah ka qaatay 76’daqiiqo Philemon Otieno, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-0 ay ku adkaadeen xulka Senegal.
Sadio Mane ayaa ku dhawaaday inuu caawa dhaliyo saddexleydiisii ugu horreysay kulankan, laakiin haatan waxaa loo diiwaan geliyey caawa inuu dhaliyey goolashiisii ugu horreeyey koobka qarammada qaaradda Afrika 2019.
Xulka Senegal ayaana sidaas kaalinta labaad kaga soo baxay Guruubka C iyadoo leh lix dhibcood, xulka Kenya ayaana sugi doona illaa berri si ay u ogaadaan inay kaalinta saddexaad xulka ugu wanaagsan kaga gudbaan heerka guruubyada.